ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ထိုင်ချင်စဖွယ် ကော်ဖီဆိုင်လေးဖြစ်ဖို့ ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲ? | Mandalay Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Mandalay | Mandalay Yellow Pages
တောင်ပေါ်မြို့လေးတစ်မြို့မှာ ကော်ဖီဆိုင်လေးဖြစ်ဖြစ်၊ Bar လေးဖြစ်ဖြစ် အေးအေးချမ်းချမ်း ဖွင့်ရင်း ကိုယ်ချစ်ရသူတွေနဲ့ အတူတူသာ အိုမင်းသွားလိုက်ရရင် လောကကြီးဟာ ပျော်စရာအတိ ကြည်နူးပီတိတွေနဲ့ ဖုံးလွှမ်းနေလိုက်မယ့် ဖြစ်ခြင်းနော်။
ဒီလိုမျိုး ငွေအရင်းအနှီးလေး စုဆောင်းပြီး မြို့လေးတစ်မြို့မှာ ဆိုင်လေးဖွင့်ရင်း အေးအေးဆေးဆေး နေထိုင်ဖို့ စိတ်ကူးယဉ်မိတဲ့သူတွေ ရှိကြမှာပေါ့နော်။ ဆိုင်ဖွင့်ဖို့ အစားအသောက် ကောင်းမွန်ခြင်းက အရေးကြီးဆုံး ဆိုပေမယ့် ကော်ဖီဆိုင်တွေမှာတော့ အစားအသောက်ထက် အရေးကြီးတဲ့ အရာတွေ ရှိပါတယ်။
ကော်ဖီဆိုင်တွေမှာ စားသုံးသူတွေကို စိတ်ကျေနပ်စေတဲ့ အရာကတော့ ဆိုင်ထိုင်ရတဲ့ Mood ပါပဲ။ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဟာ ဘယ်လိုပဲ အစားအသောက် ကောင်းမွန်ပါစေ၊ ဆိုင်ထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ ထိုင်ချင်စဖွယ် မရှိဘူးဆိုရင် ဒီကော်ဖီဆိုင်ဟာ ရေရှည်တည်တံ့ဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး။
၁။ ဆိုင်ရဲ့ Theme ကို သိပါစေ။
ကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်က ဘယ်လိုTheme နဲ့ သွားချင်တာလဲဆိုတာကို အရင်ဆုံး စဉ်းစားပါ။ အရိုးရှင်းဆုံး Theme ဆိုရင်တော့ သုံးမယ့် အရောင်အပေါ်လိုက်ပြီး ကာလာအရင့်၊ အဖျော့ စသဖြင့် ရွေးချယ်ပါ။ မျက်စိရှင်းတဲ့ Theme လား? ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ ကောင်းမယ့် ဆိုင်လေး ဖြစ်ချင်တာလား? ကော်ဖီသောက်ရင်း စာအုပ်ဖတ်လို့ရ‌အောင် ပြင်ဆင်ချင်တာလား? ဒါတွေကို အရင်ဆုံး တွေးထားရပါမယ်။
၂။ မီးအလင်းအမှောင် တိကျပါစေ။
Theme ရွေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ဆိုင်ရဲ့ Trend ကို လူတွေတန်းသိအောင် မီးအလင်းအမှောင် ကစားလို့ရပါတယ်။ ဝင်လိုက်တာနဲ့ မျက်စိအေးစေမယ့် ကော်ဖီဆိုင်လေး ဖွင့်ချင်တာဆိုရင် သဘာဝအလင်းရောင် များများရတဲ့ ပြတင်းပေါက်ခပ်ကြီးကြီးတွေကို တပ်ဆင်ပါ။ စာအုပ်တွေရှိတဲ့ ကော်ဖီဆိုင်လေးဆိုရင်တော့ သိပ်မစူးတဲ့ မီးလုံးဝါဝါလေးတွေကိုသာ တပ်ဆင်ပါ။
၃။ သုတ်ဆေးအရောင် မှန်ပါစေ။
များသောအားဖြင့် ကော်ဖီဆိုင်တွေဆိုရင် အရောင်မှိန်မှိန် ရှင်းရှင်းလေးတွေကို ရွေးလေ့ရှိပါတယ်။ အဖြူရောင် အပြာနုရောင်၊ ပန်းနုရောင် စသဖြင့်ပေါ့။ ကိုယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ Theme အပေါ် မူတည်ပြီး အရောင်ကစားလို့ ရပါတယ်။ မျက်စိစူးစေတဲ့ အရောင်တောက်တောက်တွေကိုတော့ လုံးဝမရွေးချယ်ပါနဲ့နော်။
၄။ ဆိုင်ရဲ့ ပရိဘောဂ ပြည့်စုံပါစေ။
ကော်ဖီဆိုင်တော်တော်များများမှာ တစ်ခြား စားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ ကွာခြားတဲ့ အချက်က ခင်းကျင်းထားတဲ့ ခုံဒီဇိုင်းတွေပါပဲ။ ကော်ဖီဆိုင်ထိုင်တတ်သူတွေဟာ စာအုပ်ဖတ်ရင်း၊ Laptop သုံးရင်း ထိုင်တတ်ကြတဲ့ သူတွေမို့ သူတို့ အညောင်းမမိအောင် သက်သောင့်သက်သာ ရှိတဲ့ ခုံတွေ၊ ဆိုဖာတွေ ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်။
၅။ ဆိုင်နံရံတွေကို အနုစိတ် ခြယ်မှုန်းတတ်ပါစေ။
ပြောင်ရှင်းနေတဲ့ နံရံကြီးထက် ပန်းချီလှလှလေးတွေ၊ ပန်းအိုးလေးတွေ၊ စင်တင်လက်လုပ် အရုပ်လေးတွေနဲ့ တစ်ခြားသော တိုလီမှုတ်စ ပစ္စည်းသေးသေးလေးတွေကို စီတန်းချိတ်ဆွဲထားတာက ကော်ဖီဆိုင်တိုင်းရဲ့ Signature လိုလိုတောင် ဖြစ်နေပါပြီနော်။ ဒါ့အပြင် စာအုပ်စင်လေးတွေနဲ့လည်း နံရံကို မရှင်းနေအောင် ပြင်ဆင်လို့ ရပါတယ်။
၆။ Facility စုံစုံလင်လင် ရှိပါစေ။
စားသောက်ဆိုင်တိုင်းမှာ အခြေခံရှိသင့်တဲ့ Tissue Box, Menu Book စတာတွေကို လှလှပပ၊ သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေး ထားပေးတာအပြင် Free Wifi, အားသွင်းပလပ်၊ အားသွင်းကြိုး၊ Sticky Notes တွေနဲ့ အပျင်းပြေ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် ကစားလို့ရမယ့် ကစားစရာမျိုးတွေ ထားပေထားတယ်ဆိုရင် သေချာပါတယ်၊ သင့်ဆိုင်ကို တစ်ခါထိုင်ဖူးသူတိုင်း နေ့တိုင်း လာချင်စိတ်ဖြစ်နေတော့မှာပါ။
Food and Drink Read 45 times